အတွင်းသား အလှလေးတွေ အထင်းသား ပေါ်လွင်နေပြီး ညှို့အားပြင်း လွန်းနေတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ ရဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပုံလေးတွေ – Shwe Ba
Homepage / Cele News / အတွင်းသား အလှလေးတွေ အထင်းသား ပေါ်လွင်နေပြီး ညှို့အားပြင်း လွန်းနေတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ ရဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပုံလေးတွေ
အတွင်းသား အလှလေးတွေ အထင်းသား ပေါ်လွင်နေပြီး ညှို့အားပြင်း လွန်းနေတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ ရဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပုံလေးတွေ
မင်း သမီး ချောလေး ဆောင်းယွန်းစံ က တော့ ဗီဒီယို ဇာတ်ကား တွေ နဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား ကြီး တွေ အများ အပြား ကို ရိုက်ကူး ခဲ့ ရတာ ဖြစ်ပါ တယ် … ။ သရုပ် ဆောင် ကောင်း တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ က ကျ ရာ ဇာတ်ရုပ် မျိုးစုံ ပီပြင် ပိုင်နိုင် စွာ ဖန်တီး တတ် တာ ဖြစ်ပါ တယ် … ။ အကယ်ဒမီ ရွှေကြို မယ်လေး အဖြစ် လည်း ပါဝင် ဆောင် ရွက် ခဲ့တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ က အခု နောက် ပိုင်း မှာ တော့ အရင်က ထက် ပို မို အောင်မြင် လာခဲ့ တာ ဖြစ်ပါ တယ် … .
အ ထူး သဖြင့် ဆောင်းယွန်းစံ က ပုရိသတွေ ကြား မှာ သည်းသည်း လှုပ် ရေပန်းစား ပြီး အောင်မြင် နေ တာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … ။ ဆောင်းယွန်းစံ က ရုပ်ရည် ရော Body လေး က ပါ အပြစ် ပြော စရာ မရှိ အောင် လှပနေ သလို အသား အရေလေး ကလည်း ဝင်းဝါ စိုပြေနေ တာ ဖြစ်ပါ တယ် … ။ ဒါကြောင့် ဆောင်းယွန်းစံ က ဘယ် လို ဖက်ရှင် မျိုး နဲ့ မဆို လိုက်ဖက် မှု ရှိပြီး ဆွဲဆောင် မှု ပိုနေတာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် … ။
မနေ့ က လည်း ဆောင်းယွန်းစံ က “ No Bra Day ” ဆို တဲ့ Caption နဲ့ အမိုက် စား ရိုက်ကူး ထားတဲ့ ပုံရိပ်တွေ ကို ချပြ လိုက် တာ ဖြစ် ပါ တယ် … ။ ရှပ်အင်္ကျီ လေးသာ ဝတ် ဆင် ထားပြီး ဖြူဖွေး ဝင်းဥ တဲ့ အလှတရား တွေ ပေါ်လွင် နေတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ ကတော့ အပြတ် အသတ် ဂေါ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် … ။ ကဲ ပရိသတ် တွေ အ တွက် မင်းသမီး ချောလေး ဆောင်းယွန်းစံ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေကို ပြန်လည် မျှ ဝေ ပေး လိုက် ပါ တယ် နော် … .
မင္း သမီး ေခ်ာေလး ေဆာင္းယြန္းစံ က ေတာ့ ဗီဒီယို ဇာတ္ကား ေတြ နဲ႔ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား ႀကီး ေတြ အမ်ား အျပား ကို ရိုက္ကူး ခဲ့ ရတာ ျဖစ္ပါ တယ္ … ။ သ႐ုပ္ ေဆာင္ ေကာင္း တဲ့ ေဆာင္းယြန္းစံ က က် ရာ ဇာတ္႐ုပ္ မ်ိဳးစုံ ပီျပင္ ပိုင္နိုင္ စြာ ဖန္တီး တတ္ တာ ျဖစ္ပါ တယ္ … ။ အကယ္ဒမီ ေရႊႀကိဳ မယ္ေလး အျဖစ္ လည္း ပါဝင္ ေဆာင္ ရြက္ ခဲ့တဲ့ ေဆာင္းယြန္းစံ က အခု ေနာက္ ပိုင္း မွာ ေတာ့ အရင္က ထက္ ပို မို ေအာင္ျမင္ လာခဲ့ တာ ျဖစ္ပါ တယ္ … .
အ ထူး သျဖင့္ ေဆာင္းယြန္းစံ က ပုရိသေတြ ၾကား မွာ သည္းသည္း လႈပ္ ေရပန္းစား ၿပီး ေအာင္ျမင္ ေန တာပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ … ။ ေဆာင္းယြန္းစံ က ႐ုပ္ရည္ ေရာ Body ေလး က ပါ အျပစ္ ေျပာ စရာ မရွိ ေအာင္ လွပေန သလို အသား အေရေလး ကလည္း ဝင္းဝါ စိုေျပေန တာ ျဖစ္ပါ တယ္ … ။ ဒါေၾကာင့္ ေဆာင္းယြန္းစံ က ဘယ္ လို ဖက္ရွင္ မ်ိဳး နဲ႔ မဆို လိုက္ဖက္ မႈ ရွိၿပီး ဆြဲေဆာင္ မႈ ပိုေနတာ လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ … ။
မေန႔ က လည္း ေဆာင္းယြန္းစံ က “ No Bra Day ” ဆို တဲ့ Caption နဲ႔ အမိုက္ စား ရိုက္ကူး ထားတဲ့ ပုံရိပ္ေတြ ကို ခ်ၿပ လိုက္ တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ … ။ ရွပ္အကၤ်ီ ေလးသာ ဝတ္ ဆင္ ထားၿပီး ျဖဴေဖြး ဝင္းဥ တဲ့ အလွတရား ေတြ ေပၚလြင္ ေနတဲ့ ေဆာင္းယြန္းစံ ကေတာ့ အျပတ္ အသတ္ ေဂၚေနတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ … ။ ကဲ ပရိသတ္ ေတြ အ တြက္ မင္းသမီး ေခ်ာေလး ေဆာင္းယြန္းစံ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလး ေတြကို ျပန္လည္ မၽွ ေဝ ေပး လိုက္ ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post ရင်ခုန်စရာ အတွင်းသားအလှလေးတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ သွန်းဆက်ရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယိုလေး
Next post ပရိတ်သတ်ကြီး အံ့သြသွားစေမယ့် အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းလေးပေါ်အောင် အကလေးနဲ့ ဂေါ်ပြလိုက်တဲ့ သံသာမိုးသိမ့်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး